Mpamatsy mpamaky masinin-jiro mitsivalana rojika mora vidy | YiZheng
Inona ilay masinina mpamaky vovoka rojom-bary?
ny Crusher zezika rojo mitsangana dia iray amin'ireo fitaovana fanamoriana matetika ampiasaina amin'ny indostrian'ny zezika. Izy io dia manana adaptability matanjaka ho an'ny fitaovana misy rano avo lenta ary afaka misakafo tsara nefa tsy manakana. Miditra avy ao amin'ny seranan-tsakafo ny fitaovana ary mifandona amin'ny rojo mihodina haingana ao amin'ny trano. Aorian'ny fifandonana dia voaporitra sy vaky ilay fitaovana, ary avy eo mifandona amin'ny maratra rehefa avy mamely ny rindrina anatiny amin'ny trano. Amin'izany fomba izany dia manjary lasa vovoka izy na potika ambanin'ny 3mm dia esorina aorian'ny fifandonana maromaro.
Rafitry ny milina mpamaky vovoka rojom-boninkazo
Amin'ny dingan'ny famotehana, ny Crusher zezika rojo mitsangana Mampiasà hafainganam-pandeha mitovy amin'ny lozam-pifamoivoizana misy karatra karbôna tsy matanjaka, ary famolavolana mety ho an'ny fidirana sy ny fivoahana, mba ho mitovy endrika ny fitaovana vita ary tsy hitazomana ao anaty masinina. Ity karazana crusher ity dia mandray ny teknolojia farany sy vy avo lenta, famolavolana rafitra fanatsarana ny rafitra, noho izany dia misy vokatra betsaka sy azo itokisana.
Fampiharana ny milina mpamono vovoka rojom-boninkazo
Andian-tsarimihetsika LP Crusher zezika rojo mitsangana dia mety amin'ny fanorotoroana ny fitaovana lehibe amin'ny tsipika famokarana zezika mitambatra, fa be mpampiasa amin'ny indostrian'ny simika, akora fananganana, fitrandrahana ary indostria hafa.
Ny tombony amin'ny milina mpamono vovoka rojom-boninkazo
•Crusher zezika rojo mitsangana no iray amin'ireo milina tranom-borona marindrano ho an'ny habeny afovoany.
•Crusher zezika rojo mitsangana manana firafitra mora, sy tokontany kely, ary fikojakojana Mora.
•Crusher zezika rojo mitsangana Ny milina dia misy vokany tsara, fandidiana malefaka, madio madio.
•Fahavalon'ny fitaovana henjana be dia be izy io.
Vertical Chain Fertilizer Crusher Machine Mampiseho horonantsary
Safidy miendrika rojom-boninkazo rojom-pifidianana volo
Haben'ny famahanana maksimum (mm)
Torotoro potika (mm)
Teo aloha: Fitaovana zezika voajanahary semi-wet amin'ny fampiasana Crusher
Manaraka: Masinina mpamaky zezika roa-dingana